Isaziso sokutshintsha kobume benkampani
Ixesha Post: 09-20-2020
Bathengi abathandekayo: Ishishini lethu liyanda ngenxa yophuhliso oluqhubekayo kule minyaka. Ukusukela ngoSeptemba 2020, simisela inkampani entsha egama linguJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd iJiangsu Joyina i-Industrial Co, Ltd ngoku lisebe leJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd. Nceda uqaphele ukuba. Funda ngokugqithisileyo »
UMAHLUKO PHAKATHI KWAMA-304 NANGAMA-316 ENTSIMBI YENTSIMBI
Xa ukhetha insimbi engenasici ekufuneka inyamezele iimeko ezinobungozi, izitya ezingenasici ezingenasici zihlala zisetyenziswa. Ukufumana iipropati ezigqwesileyo zoomatshini, amanani aphezulu e-nickel kunye ne-chromium kwii-austenitic steels ezingenasici nazo zibonelela ngokumelana nokubola. Ukongeza, ...Funda ngokugqithisileyo »